IHenan Wild Medical Technology Co, Ltd.
Umthengisi kunye neQabane kwiShishini
unolwazi kwaye unamava
Ubungcali boShishino olunzulu
I-HENAN WILD MEDICAL TECHNOLOGY inomsebenzi omnye olula: Ukwenza ukuthenga kwakho kube lula.
I-WILD MEDICAL izinikele ekugcineni amashishini ayo okurhweba ngokwesiko ngelixa iphuhlisa iimarike ezintsha kunye nokwandisa iipotifoliyo zayo zabucala. Inkampani idala ixabiso elongeziweyo kumashishini njengotyalomali osebenzayo ngokubonelela ngengcebiso yeqhinga, isikhokelo sezemali kunye nenethiwekhi yomhlaba wonke. AMAYEZA EZENDLU afumana impumelelo kutyalo-mali lwawo ngokuxhomekeka kubunyani babaphathi bawo kunye nokuzinikela kwawo kwinkonzo ebalaseleyo.
I-WILD MEDICAL ifuna ukuthengiselana kunye nentsebenziswano namaqela olawulo abanetalente ngenjongo yokufezekisa ukusebenza okugqwesileyo ngokuhamba kwexesha. Sijolise kumashishini azinzileyo aneenjongo zokukhula kwexesha elide ezinethuba lokwandiswa kwehlabathi.
Sizimisele ukudala ukuthengwa kweemveliso zonyango enye, ukwenzela ukufezekisa imfuno eyahlukeneyo kubo bonke abathengi kwindawo eyahlukileyo kunye nonyango lwezonyango olwahlukeneyo kuphuhliso oluqhelekileyo.